ABASEKELI - Beijing Convista Flow Control Equipment Co., Ltd
I-CONVISTA ayinikezi kuphela ukweluleka kwezobuchwepheshe kwesisombululo sokulawulwa kokugeleza esigabeni sokuqala, futhi futhi yenza nomsebenzi oyingcweti wedokhumentari wephrojekthi yonke.
Futhi ngemuva kwenkonzo, iqembu lesevisi yobunjiniyela be-CONVISTA linganikeza ukuphendula okufika ngesikhathi ezidingweni zamakhasimende emhlabeni wonke: ukufakazelwa nokusekelwa kwezobuchwepheshe ekuthumeleni nasekuqaliseni isigaba, isondlo sivale ukwengamela, ukuxazulula inkinga nokulungisa insiza, ukukhetha imishini, ukugcinwa nokusebenza koqeqesho.
Inhloso enkulu kaCONVISTA ukuhlinzeka ngezixazululo zokulawula ukugeleza kwezimboni ezahlukahlukene ngokumelene nezidingo zamaphrojekthi ahlukile.
Isinyathelo1: Ithimba lethu lobunjiniyela, okokuqala, lizohlaziya ngokucophelela izimo zesevisi yephrojekthi, imininingwane yezobuchwepheshe nokunye okunjalo, ngaleyo ndlela yakhe ukuhlolwa okufanele;
Isinyathelo2: Igatsha lethu lezebhizinisi lizohlola izidingo ezikhethekile nezentengiselwano zamakhasimende bese liphendula ngokufanele kumphathi omkhulu wokuthengisa;
Isinyathelo3: Ngokususelwa kwimininingwane engenhla, onjiniyela bethu bazokhetha uhlobo olulungile, izinto ezifanele, ama-valve wokusebenza kwesokudla nama-actuator afinyelela kuzidingo zamaphrojekthi, futhi, ukuze kuzuze iklayenti, ukonga izindleko nakho kuzoba ngenye yezinto abazicabangayo.
Isinyathelo4: Ithimba lezentengiselwano lizolungisa isisombululo esikhulu, lithumele i-Technical Quotation & Quotation yezohwebo kumakhasimende ngama-E-mail.
2．Quality Isiqinisekiso & Quality Control
Zonke izimboni ezigunyazwe yi-CONVISTA akudingeki nje kuphela ukuthi zibambe zonke izimvume ezinkulu, kufaka phakathi i-ISO9001, i-API 6D, i-API 6A, i-CE / PED, i-HSE, i-API 607 ​​/ i-API 6Fa Isitifiketi Sokuphepha Komlilo,
kepha futhi, kufanele ngibe nenqubo yokulawula eqediwe kusuka ezintweni ezingavuthiwe kuya emikhiqizweni eqediwe. Abasebenzi Nesikhungo Sokulawulwa Kwekhwalithi Yangaphakathi kufanele ifaneleke kakhulu ukwenza isivivinyo seRadio graphic, ukuhlolwa kwe-Ultra-sonic, Ukudaya Ukungena, Ama-Magnetic Particles, Positive Material Identifier (PMI), Test Impact, Tensile test, Hardness test, Fire Safe Test , Ukuhlolwa kwe-Cryogenic, ukuhlolwa komshini, ukuhlolwa kokuphuma kombaleki okuphansi, ukuhlolwa kwegesi ephezulu, ukuhlolwa kokushisa okuphezulu nokuhlolwa kwe-Hydro-static.
3．Ucwaningo, Intuthuko kanye Nokusungula
I-CONVISTA inobungcweti obubanzi ekwakhiweni kwama-valve, kanye nezinhlelo ezihlanganisiwe ze-CAD / CAM (Solid Works) eziwasebenzisa ngokugcwele amathuba ezixazululo zobunjiniyela ezintsha nezinokuncintisana ngenkathi kuqinisekiswa ukuhambisana nawo wonke amazinga afanele.
I-CONVISTA ibilokhu ivelele ikakhulukazi ekwakhiweni kwemiklamo emisha yamaphayiphu amakhulu yenkonzo yomfutho ophakeme kanye neyokushisa, ama-valve e-Cryogenic ama-Valve Corrosion nemikhiqizo eyenzelwe ngokukhethekile amasevisi athile.